मुख्य खबर | गृहपृष्ठ | Page 222
काठमाडौं । धनुषामा निर्माणाधीन ४००/२२० केभीको ढल्केबर सबस्टेशन आगामी पुसभित्र सञ्चालनमा आउने भएको छ । सबस्टेशन...
काठमाडौं । सातओटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ का लागि आयव्यय सहितको बजेट आइतवार सार्वजनिक गरेका छन...
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने संस्थागत सामाजिक दायित्व (सीएसआर) को रकम ससाना कामहरूमा केन्द्रि...
निकेश खत्री काठमाडौं । नेपालमा सबैभन्दा बढी केको मासु खपत हुन्छ ? तपाईंलाई लाग्ला– कुखुरा र खसीको । तथ्यांकले...
असार १, काठमाडौं (अस)। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर...
on: June 20, 2018 मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक बजारमा निष्कासित हुने शेयर खरीदका लागि आवेदन दिने अधिकतम सीमालाई हटाएको छ । बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ लाई संशोधन गरी...	बिस्तृतमा
काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकभित्र मरीचको आयात अत्यधिक रूपमा बढेको छ । विशेषगरी तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा मरीच आयात अत्यधिक रूपमा बढेको देखिएको छ । सन् २०१८ को जुन ६ देखि १४ तारीखबीचमा विभिन्न...	बिस्तृतमा
on: June 19, 2018 मुख्य खबर, समाचार
असार ५, वीरगञ्ज । वीरगञ्जको मुख्य नाकाबाट भारततर्फ मरिच तस्करीको घटना रहस्यमय बन्दै गएको छ । अनुसन्धानका क्रममा छाला निकासी भन्दै मरिच लैजान लागेको खुलेपछि अनुसन्धानको दायरासमेत फराकिलो बन्न...	बिस्तृतमा
असार ५, काठमाडौं । उद्योग विभागले औद्योगिक विवरण पेश नगर्ने उद्योगपतिलाई कारवाही गर्ने भएको छ । विभागले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को प्रावधानअनुसार २०७३/७४ को औद्योगिक विवरण अद्यावधिकका लागि...	बिस्तृतमा
चर्को ब्याजदर पाउँदा शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता घट्दै
on: June 19, 2018 मुख्य खबर, लगानी
असार ५, काठमाडौं (अस) । मङ्गलवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ७३ प्रतिशत घटेर बन्द भएको छ । कारोबार भएको २० मिनेटसम्म बढेको बजार त्यसपछि अन्त्यसम्म ८ दशमलव ९७ अङ्कले घटेर बन्द भएको छ । १ हजार...	बिस्तृतमा
६ दिनका लागि प्रधानमन्त्री चीन प्रस्थान, कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीमा पोखरेल
असार ५ काठमाडौं (अस) । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ दिने औपचारिक चीन भ्रमणका लागि मङ्गलवार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । १ सय १९ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दैै प्रधानमन्त्री ओली ह...	बिस्तृतमा
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण : आठओटा नाका खोल्न सहमति हुँदै
काठमाडौँं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा आज मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै छन् । ओलीले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री भएका बेला २०...	बिस्तृतमा
बोनस र हकप्रद शेयरमा लाभकर : भारित औसत लागतको आधार लिन सुझाव
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र सीडीएससी तीनओटै निकायले हकप्रद र बोनस शेयरमा पूँजीगत लाभकर गणना गर्दा भारित औसत लागतलाई आधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ती तीन निका...	बिस्तृतमा
स्थानीय तहको लेखा व्यवस्थापन : प्रयोगमा आएन ‘सूत्र’
काठमाडौं । स्थानीय सरकार डिजिटल प्रणालीमा अभ्यस्त हुन नसक्दा सङ्घले हस्तान्तरण गरेको बजेट र अनुदानको लेखा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । सङ्घले ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहको बजेट तथा खर्च...	बिस्तृतमा
सिन्धु विकास बैङ्कको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हेर्नहोस् आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण :
on: June 18, 2018 मुख्य खबर, लगानी
सिन्धु विकास बैङ्क लिमिटेडले आव २०७४/७५ को तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार रू. १ करोड ८१ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा २९ प्रतिशतले कमी हो । बैङ्कले अघिल्लो आवको सोह...	बिस्तृतमा